Wararka Maanta: Khamiis, May 31, 2012-Dowladda Kenya oo sheegtay inay ka go'an tahay qabsashada Kismaayo iyo Xarakada Al-shabaab oo sheegtay inay difaacanayso
Jen. Karangi ayaa sheegay in ciidamadoodu ay horay u qabsadeen degaanno badan oo ku dhow magaalada Kismaayo oo ah xarunta gobolka Jubbada Hoose, wuxuuna hadalkiisa ku daray in hadda ay diiradda saarayaan sidii ay degmadaas si buuxda ugu qabsan lahaayeen.
"Qorshaheenna waa mid ku wajahan Kismaayo, waxaana rajeynaynaa in dhawaan ay noqoto goob ay ay ciidamadeenu gacanta ku hayaan. Waana ajandaha ugu horreeya ee AMISOM," ayuu yiri Jen. Karangi kaddib kulan uu la yeeshay wafdi ka socday dalka Mareykanka.
Taliyaha ciidamada Kenya wuxuu sheegay in ciidamadooda ay masaafo 7-km ah ay u jiraan Kismaayo marka laga eego dhinaca badweynta Hindiya. "Waxaan qabsan doonnaa Kismaayo inta aan la gaarin Ogoosto oo xilliga DKMG ah uu ku egyahay," ayuu hadalkiisa raaciyay.
Hadalkan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo Xarakada Al-shabaab ay shalay kusoo bandhigeen magaalada Kismaayo hub iyo ciidamo fara badan, kuwaasoo ay ku sheegeen inay difaaci doonaan magaaladaas iyo deegaannada ku dhow-dhow.
Afhayeenka Al-shabaab, Sheekh Cali Dheere oo dhoolla-tuska kaddib hadlay ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay difaacdaan Kismaayo illaa midkooda ugu dambeeya ay naftu ka baxayso.
Magaalada Kismaayo oo lagu tilmaamo goobta ay dhaqaalaha ugu badan ka hesho Xarakada Al-shabaab ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay gaarayay ciidammo ka baxay Muqdisho iyo Afgooye, iyadoo sidoo kalena ay maraakiibta Kenya duqeyn ku hayeen.
5/31/2012 6:42 AM EST